Iphakheji enkulu yezixhobo: ii-icon ezingama-908 + 1.973 zokuzikhuphela simahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lua louro | | Iimpawu, Izibonelelo
Ukuba uthi awuzange ufune ukufaka utolo oluncinci kuyilo, uyaxoka. Kwaye kuya kufuneka ubone ukuba kunzima kangakanani ngamanye amaxesha ukufumana utolo olusikholisayo, olufanela iprojekthi yethu ... Kwaye xa siyifumanisa, besichitha ixesha ngento encinci enjalo.
Ngoko ke ungaphinde uchithe ixesha ekudaleni into esele yenziwe, namhlanje sikuzisa ookumkani bemithombo. Isithuba esidityanisiweyo eyona intle (kwaye ngokubanzi) Iipakethe zokukhuphela simahla. Kuba ewe, unokuzikhuphelela ezi icon simahla kwaye usebenze nazo. Funda.
Iimpawu ze-908 + 1.973 zokuzikhuphela simahla
Entypo iseti yeefotogram ezingama-250 ezenziwe ngesandla. Xa ukhuphela ipakethi ungazifumana njengenxalenye yokuchwetheza, kwiifom ze-EPS, zePDF nezePSD. Konke oku kuphantsi kwelayisensi yokusebenzisa CC BY-SA 3.0. Iipictograms ziyilelwe ngu UDaniel bruceUyilo oluphezulu olujolise ekuhlaleni kwidijithali eStockholm. Uyilo lwewebhu lwe-Entypo kunye nophuhliso lwenziwe UAndreas Blombäck, ohlala eStockholm.
Iintlobo Yibhetshi yeempawu ezingama-308 zasimahla onokuzisebenzisa kwiwebhusayithi yakho. Intoni? Kuya kufuneka ulayishe ifayile ye typicons.css kwindawo yakho njengoko kuchaziwe eli nyathelo ngenyathelo lesifundo.
Ipakethi yeBrankic1979. Le yipakethe yeempawu ezikhululekileyo ezingama-350 zokukhuphela simahla. Njengoko besitsho kwiwebhu, bazilungele izicelo, iiwebhu okanye nantoni na onokuyicinga. Into ongenako kukusasaza le seti yeempawu ngaphandle kwemvume yazo: kodwa ukhululekile ukuzisebenzisela umsebenzi wakho kunye noworhwebo.
Kwaye sigqiba esi sithuba sobutyebi sinendawo yokukhangela ii-icon ezingakumbi. Kwi IconMonster uya kufumana ii-icon ezimnyama nezimhlophe zowe-1973 zokukhuphela simahla. Kule webhusayithi ungalawula ngokukhangela ngqo kwibhokisi yencoko yababini ethi "Khangela" okanye ngokunqakraza kwiimpawu ezibonakala emva kwebhokisi esele ithethiwe. Eyokuqala isithumela kwiphepha lasekhaya lika IconMonster. Eyesibini isetyenziselwa ukubonisa ngokungacwangciswanga nayiphi na i icon kwiwebhu. Okwesithathu kusibonisa ezona icon zidume kakhulu kwiwebhu. Kwaye eyokugqibela isibonisa iindidi eziphantsi kokuhlelwa kweempawu zevenkile ekwi-intanethi: Imultimedia, uthungelwano (uthungelwano), ukhuseleko (ukhuseleko), imiqondiso (imiqondiso), intlalo kunye newebhu.
Ngaba ufuna ngaphezulu? Hlala nale ipakethe ye-120 yeempawu ezikhululekileyo ezenzelwe wena.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ipakethe yeempawu ze-120 ezikhululekile ezenzelwe wena
Imvelaphi Entypo, UDaniel bruce, UAndreas Blombäck, Iintlobo, IconMonster, UBrankic. 1979
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu » Ipakethe yezixhobo: ii-icon ezingama-908 + 1.973 zokuzikhuphela simahla
Iimephu zaSimahla zeVectors zawo onke amazwe eMhlabeni